Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Zanzibar oo lagu Kordhinayo Dalxiiska Jasiiradda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Zanzibar oo lagu Kordhinayo Dalxiiska Jasiiradda
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Madaxweynaha Zanzibar ee Bandhig Faneedka Caalamiga ah
Madaxweynaha Zanzibar Hussein Ali Mwinyi wuxuu taageeray qabanqaabiyeyaasha Sannadlaha Caalamiga ah ee Filimka Zanzibar (ZIFF) wuxuuna sheegay in munaasabadda ay soo bandhigi doonto oo ay horumarin doonto dalxiiska iyo hiddaha jasiiradda.
ZIFF waa mid ka mid ah xafladaha aflaanta Afrika ee ugu horreeya, iyada oo loo calaamadeeyay inay tahay dhacdo muhiim ah.
Madaxweyne Mwinyi ayaa ka sheegay aqalka madaxtooyada ee Zanzibar in xafladaan ay gacan ka geysaneyso horumarinta iyo xayeysiinta dalxiiska Zanzibar.
Mwinyi ayaa xaqiijiyay in dowladdu ay sii wadi doonto wada shaqeynta ay la leedahay ZIFF si loo hubiyo in ay sii wado in ay gaarto guulo badan.
Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Zanzibar waxaa la bilaabay 24 sano ka hor iyadoo guul weyn laga gaadhay Zanzibar. Munaasabaddan sannadkan waxay ka dhici doontaa 21-ka illaa 25-ka Luulyo Stone Town, Zanzibar oo ah meesha ugu horraysa dalxiiska dalxiis iyo goob dhaxal dalxiis.
Abaabulayaasha sanadkan ZIFF ayaa soo jiitay in ka badan 240 filim oo ka kala socda 25 dal. Tanzania waxay leedahay 13 filim halka Kenya ay leedahay 9, Uganda 5, iyo Koonfur Afrika 5.
Waxaa jira 67 filim oo loo xushay baaritaanka sanadkan, oo leh 10 filim oo muuqaal ah, 5 dokumentiyo muuqaal ah, iyo 40 filimaan gaagaaban iyo animations oo tartan ah, ayuu yiri Agaasimaha ZIFF Professor Martin Muhando.
Sannadkan, waxaan helnay in ka badan 240 filim wadar ahaan. Waxaan ka helnay filim 25 dal oo ay ka mid tahay markii ugu horeysay oo filim laga keeno Estonia, ”ayuu raaciyay.
Iiddii ujeedadeedu waa in kor loo qaado wacyiga iyo kor u qaadista shineemooyinka caalamiga ah sida farshaxanka, madadaalada, iyo sida warshadaha, kor u qaadista wadahadalka, xuquuqda aadanaha, iyo xorriyadda.
Iyada oo loo marayo barnaamijyadeeda, xafladdu waxay gaadhay dhagaystayaal kala duwan oo kala duwan, taas oo ah waxa ka dhigaya ZIFF mid ka duwan.
Prof. Muhando ayaa sheegay in xafladani ay wax weyn ku soo kordhinayso fahamka wanaagsan ee shineemooyinka iyada oo loo marayo fagaarayaasha ay ku kulmaan ee bulshada, baaritaanka bulshada, iyo muusigga iyo barnaamijyada farshaxanka.